You are here: Home somal Waraysi gaar ah xasan waraabe cade oo ka mid ah bahwaynta ciyaaraha Somaliland
Waraysiguna waxa uu u dhacay sidan:- Ugu horayn waxa aad ka warantaa dhibaatadaasi ka dhacday bada ee ay ku dhamaadeen dhalinyarta reer Somaliland?
Waraysiguna waxa uu u dhacay sidan:-
Ugu horayn waxa aad ka warantaa dhibaatadaasi ka dhacday bada ee ay ku dhamaadeen dhalinyarta reer Somaliland?
Jawaab: Ugu horayn waxa aan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen iyo waliba umada reer Somaliland geeridii naxdinta lahayd eek u timid dhalinyarta ku nafwaayey masiibadii tahriibka.
Sidee baad u aragtaa wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaruhu ee magaca dhalinyarada matashaa doorka ay ku yeelan karto ka wacyigelinta tahriibka iyo dhiirigelinta dhinaca isboortiga?
Jawaab: Wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxa ay masuul ka tahay dhamaan dhalinta ku dhaqan Somaliland waxaanan u arkaa in ay masiibadadan qaran ee dhacday ay kaalin ku leeyihiin maadama oo aanay wax dhiirigelin iyo wacyigelinba u samayn habayaraatee dhalinyarada reer Somaliland, taasina waxa ay ku tusaysaa in ay wasaaradu ku fashilantay shaqadii ay qaranka u haysay. Waxaanan ugu baaqayaa madaxweynaha qaranku in uu dib u eegis ku sameeyo wasaarada ciyaaraha si aanay mar dambe u soo noqnoqon dhibaatadan soo jiitamaysay tan iyo markii lagu soo noqday dalka .
Waxa aad ka warantaa madaxweynuhu waxa uu magacaabay gudi ka shaqayndoonta tahriibka gudidaasi wax hawl ah ma ka qabteen shaqada loo magacaabay?
Jawaab: Sida runta ah waxa uu madaxweynuhu magacaabay gudidaasi isugu jirta masuuliyiin ka tirsan xukuumada gaar ahaan golaha wasiirada, laakiin waxa wax lala yaaba ah in gudidaasi aanay wax shaqo ah qaban waxaana ku tusaya in qaar ka mid ah gudida ay ku jiraan caruurtoodu ka tahriibeen, sidaa daraadeed waxan u malaynaya qof caruurtiisa wax u qaban kari waayey in aanu qaran iyo bulsho toona waxba tarayn.
Hadii ay xukuumadu kuu magacowdo wasiir ma qaadan lahayd?
Jawaab: Muhiim maaha in aan wasiir noqdo laakiin intaa waxa aan ku fooganahay danta umada gaar ahaan danta dhalinyarada, marmarka qaarna waa ay dhacday in aan la kulmo qaar ka mid ah masuuliyiinta qaranka laakiin ilaa hada ma ay dhicin in aan isla soo hadal qaadno in aan wax xil ah ka qabto dawlada.
Xagee ayuu ku dambeeyey koobkii gobolada Somaliland?
Jawaab: Koobkaasi waxa uu noqday mid u hor seeda in aynu wayno dhalin inugu qaali ah, waxa ayna gaadhay heer in aroor ama subax la ciyaaro rabshadaha dhacay awgeed waxa ayna u baahantahay in qorshe laga yeesho .
Dhalin yar badan waxa ay qabaan in qurba jooga laga horaysiiyo xaga fursadaha shaqada ama xilalka laga qabanayo dowlada taas maxad ka odhanaysaa?
Jawaab: Waa ay jiraan dhalinyarada qaar ka mid ah oo xilal ka haya dowlada laakin maaha muhiim in ay dhalinyaradu ku doodaan qurba joog ayaa dalka xilal laga siinayaa, qurba jooguna waa qaar ka mid ah dadkii dalkan wax u soo qabtay markaa lama odhan karo sidaasi.
Gebogabadii maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada reer Somaliland?
Jawaab: Waxa aan ugu baaqaya in ay dhalinyaradu u samraan dalkooda kana shaqeeyaan horumarka dalkooda, waalidkuna ay ka qaybqaataan wacyigelinta doorka ay ku leeyihiin, xukuumaduna ay ka qaybqaataan in ay dhalinyarada fursado shaqo u abuuraan waxaanan leeyahay dhalinyarada dalkasta oo aduunka ka mid ah waxa kor u qaaday waa dhalinayrtiisa sidaasi ay tahay ku fekera in aad dalkiina wax ku biirsataan Ilaahayna ha idin la garab galo.
Waad mahadsantihiin xorriyo news.